मनका केही कुरा
धेरै दिनदेखी न कुनै समाचार न कुनै मनको कुरा लेख्न मन लागेको छ - किन यस्तो भएको होला म आफैलाई थाहा छैन । त्यसैले व्लगमा केही नयाँ कुरा अपडेट गर्न पाएको छैन ।
अब नयाँ उत्साहाका साथ पुन लेखनका अनेको विधामा हात हाल्ने तयारी गर्दैछु । तर यहा एउटा भनाई मनन योग्य छ 'असफल ब्यक्तिहरू सधै केही गर्ने योजनामा हुनछन्, तर केही नगरी मर्दछन् ।' सधै योजनामा मात्र सिमित हुन्छन । यसलाई राम्रोसँग विचार गरेको पनि छुँ । र व्यबहारमा उतार्ने पनि प्रतिवद्वता छ ।
Posted by Journalist Yadav at 9:22 PM No comments:
माईला डट कम
कफिसपको तीन दिनको कहानी
काठमाडौ । सहरको एउटा ब्यस्त कफिसप । जहाँ विहानदेखि बेलुकीसम्म चिया, कफि, दुनोट, चिसो को ब्यापार हुन्छ । व्यापारमा सहभागी छन् २०/२२ वर्षी वँैशालु
साहुनी र किशोर माइला कामदारको रुपमा संलग्न छन् । पहिलो दिन साहुनी र कामदारको समन्धका बीच फरक देखा पर्छ तर दिन बित्दै जाँदा उनीहरूको सम्बन्धमा पनि परिवर्तन आउँछ । साहुनी र माइलाको सम्बन्ध दोस्रो दिन पहिलो दिनकोजस्तो रहँदैन । हाप कट्टु र मैलो टिर्सट लगाएको केटोले एक दिन पसल सफा गर्दा कुनै ग्राहकले छोडेको 'लभ ग्रेटिङ कार्ड' फेला पार्छ ।
'यो के हो -
कार्ड मा भएको अक्षर देखाउँदै माइलाले साहुनीलाई सोध्छ ।
'आई लभ यु भनेको '
साहुनीको यो सम्वाद सँगै माइलामा प्रेमको बीजारोपण हुन्छ । माइलाले दैनिकजसो दूधका प्याकेट खोल्न कैंची माग्छ सँगै साहुनीको प्रेम पनि ।साहुनीले मुस्कान र माइलाप्रति देखाएको सदासयतामा कामदार माईला र साहुनीको बुझाइ फरक/फरक हुन्छ । तेस्रो दिन यी दर्ुइको सम्बन्ध झन् अघि बढ्छ र एउटा विन्दु मा पुगेर सम्बन्धमा
पू र्ण्र्ाावराम लाग्छ।
यो ट्राजेडी बास्तविक भने होइन । यो त राधानीस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा मञ्चन भइरहेको नाटक 'माइला डट कम' को कथानक हो । दयाहाङ र्राईले निर्देशन गरेको यो नाटक गत हप्तादेखि मञ्चन भइरहेको छ । सिर्जना सुब्बा साहुनी चरित्रमा र राजन खतिवडा माइलाको भूमिका निभाइरहेका छन् ।
एक वर्षगाडि नै तयार भएर मञ्चन हु ँदा पनि यस नाटक प्रशस्त चर्चा बटुलेको थियो । तर अघिल्लो वर्षमाइलाको भूमिकामा थिए रबिन पाण्डे । 'सडक दर्ुघटनामा परी पाण्डेको ज्यान गएपछि माइलाको अन्त्य भएन ।' नाटकको मञ्चन शुरु भएको दिन निर्देशक र्राई माइला डट कमको बास्तविक कथा सुनाउँदै थिए ।
करीब पचास मिनेटको नाटकमा थुप्रै घटना, संवाद, प्रसंग दोहोरिन्छन् । नाटक लेखन पनि आफैँले गरेका निर्देशक र्राई संवाद, प्रसंग प्रयोगका रुपमा जानजानी
दो होर्‍याएको बताउँछन्, 'धेरै रिपिटेसनहरू छन् जसरी हाम्रो जीवनमा घटनाहरू रिपिट हुन्छ र तिनको केही अर्थ नहुन पनि सक्छ ।'
माइला हाम्रै सहरको कथा हो । उनले सहरका गल्लीका होटलमा भेटिने माइलालाई टिपेर स्टेजमा ल्याएका छन् । अलि लठेब्रो स्वरमा प्रस्तुत भएका माइला र 'नक्कली' साहुनीबीचको यो 'लभस्टोरी' युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेडसेन्टरमा भदौ महिनाभर - हप्ताको शुक्रबार, शनिबार र आइतबार) चल्नेछ ।
Posted by Journalist Yadav at 12:04 AM No comments:
हाम्रो इन्द्रावती पनि पत्तै नपाइ एक वर्ष लागिसकेछ । हेरै हाम्रो इन्द्रावती साप्ताहिक पत्रिकाको spical programme in dulikhel केही भलक :
date : 2066\_04\_26
धुलिखेल लजबाट देखीएको भलक : सुन्दर धुलिखेल
Posted by Journalist Yadav at 1:49 AM No comments:
हामी भेडा बाख्रा भन्दा पनि खत्तम रे !
मिति : २०६६ जेष्ठ ६ गते
स्थान : कालोपुलको एक चियापसल
भरखरै मात्र एक दैनिक पत्रीकामा भारतको एक कफीपसलको बारेमा पढेको थिए । पत्रीकाले जनाएअनुसार पुरानो कफी पसल बन्द गर्न लाग्दा सर्वसाधारण्ाको विरोध । जुन पसलको बहसले थुप्रै नेताहरू उत्पादन गरीसकेको छ रे । म पनि नेपालको चिया पसलको नै कुरा कोट्‍याउदै थिए । हाम्रा चियापसल पनि भारतको भन्दा कम छैन । यहाका चिया पसलमा पनि तात्तातो बहस हुने गर्दछ । शायद त्यो चियाभन्दा धेरै तातो । त्यसैले त कुराकानीमा लागेपछि चिया सेलाएको पनि पत्तो हुदैन त हामीलार्इ ।भmन्‍ पत्रकारका लागि त यस्तो चियापसल आप्‍mनो सम्पर्क बढाउँने कामका लागि ज्यादै फार्इदा हुुन्छ । त्यसैले घरमा चिया पिएपनि बाहीर त्यही ठाँउमा चिया नपिइकन चितै बुभ्‍mदैन होला । शनिबारको प्रशंग अलिकति फरक छ । यो बेला नयाँ सरकारका पक्ष्ा विपक्ष्ा बारे छलफल केन्द्रीत थियो । यसैबारे चर्काचर्कि बहस जारी थिए । त्यसैबेला सिमाना मिचिएको पनि कुरा उठ्‍यो । अनि फेरी पार्ट्टीगत विभाजन । फलानेले सर्मथन गर्‍यो पलानोले विरोध गर्‍यो । यस्तै............. यस्तै ........................।
त्यतीनै बेला एक अधबैशे (अन्दाजी ५५ वर्ष्ा ) जुरुक्क उठेर कराए । हामी नेपाली खत्तम भएर हाम्रो सिमाना मिचिएको रे ! हामी त भेडाजत्तीको पनि सचेत छैनौं रे । अनि उनले प्रशंग कोट्‍याए तिब्बती भेडाको, तिब्बतबाट किनेर ल्याएको भेडा कथम कदाचीत भाग्न पायो भने तिब्बत नै पुग्छ रे! बोर्डर कटाइसकेको भेडापनि बाटो खोज्दै त्यतै जान्छ रे † तर हामी नेपाली भेडाजत्तीको पनि राष्ट्रभक्त हुुन सकेनौ । 'यहाँको ( चिया पसलको) बहस त तात्तो न छारो †नेपाली चुपचाप भारतीय अतित्रmमण्ालार्इ स्विकार गदै पछि हट्‍दै छन्‍ ।' उँहाको यो ओजपुर्ण्ा र आत्रmोस भनाइपछि त्यहाँका गफाडी भनाउँदा स्तब्ध भए । म पनि उठेर आप्‍mनो गतव्यतीर लागे । तर बाटोभरी यो कुरा मनमा खेलीरह्‍यो । भेडाको प्रशंगबारे म त जानकार होर्इन, उनले यो कुरा अनुभव भएर भने न बनाएर भने त्यसको अड्‍कलबाजी त गर्न सकीएन । तर उनको यो सम्पूर्ण्ा नेपालीको निरीहताप्रति व्यग्यले भने शिर भुmकाइदियो !!!
यत्रो भारतीय खुलेआम हस्तक्ष्ोपबाट लाखौ नेपाली दाजुभार्इ विस्थापित हुदा, भुमी लुटीदा, आमा दीदि बलाकृत हुदा हामीले के गर्‍यौ.... एकपटक गम्भीरतापूर्वक सोच्ने कि!!!
Posted by Journalist Yadav at 6:47 AM No comments:
........................त्यही नारा मेरो कानमा गुज्जीरहेको छ ।
आज २०६५ जेठ २९ गते नेवा स्वायत्त राज्य परिष्ा्‍दका बन्द थियो । तर पनि म कालोपुलदेखी हिड्‍दै अफिस आइपुगे । लगभग यो ५ कीलोमिटरको बाटोको यात्रा रोमाञ्चक नै रह्‍यो । यो बाटोभरी म एक्लै नै थिए त्यसैले पनि मेरो मन शान्त रह्‍यो । 'अन द ओए' मेरो मस्तीस्कमा धेरै कुरा खेल्ने मौका पायो । यो बन्द "नेवा स्वायत्त राज्य"को माग सहित नेवारका विभन्नि जातिय संघ सस्थाले आयोजना‍का थिए । मैले करिब करिब १० बटा चोक पार गरेर आएको थिए । प्रंत्येक चोकका १०—१५ जना भन्दा बढी बन्दकर्ता थिएनन्‍ । काठमाडौ उपत्यकमा नेवारको सख्या कति होला र उनीहरुको उपस्थिति किन यति कम ? म सोच्न बाध्य भए । बन्र्दकर्ताको भिडमा पनि गरै नेवारको पनि उपस्थिति देखीन्थ्यो । ति माओवादीको भण्डामुनी उभीएका थिए । के नेवारपनि दलगत रुपले हेरेर आप्‍mनो जातीय हकको पक्ष्ामा पनि आवाज उठाँउन पछि हटेका हुन्‍ त ?मेरो मनमा फेरी उनीहरुले उठाँएका नारहरुबारे ध्यान खिच्न थाल्यो । आफ्‍नो भाष्ाामा गर्व गदै उनीहरूले नेपाल भाष्ाामै नारा लगाएका यिए । तर पनि मेरो यो ५ वर्ष्ो काठमाडौ उठबस भएको दिमागले उनीहरुको धर्म सस्किति भाष्ालार्ल केही बुभmन थालीसहेको थियो । उनीहरुले अब बन्ने संविधानमा नेवा : स्वायत्त राज्य शुनिस्चिताको माँग र काठमाडौ शहरीकरण्ा बिधेयक खारेजको माँग समेत गरेका थिए । यो पुरा नभए उनीहरुको एउटा माग थियो जो मलार्इ अलि अनोठो लाग्यो । त्यो थियो काठमाडौ बाट राजधानी सानर्ुपनर्े । हो यो मागले मलार्इ सोच्न बाध्य बनायो । यो मागमा कति पिडा लुकेको छ । बर्ष्ादेखी आप्रवासीहरुको आगमनले आप्‍mनो थाकथलोबाट भmन्डै भmन्डै विस्थापीत नै हुन लागेका उपत्यकाका आदीवासी नेवार समुदायको हक अधिकार सुनिश्चीत गनर्ु अब बन्ने संविधानको दायित्व हो र त्यसको निर्माण्ा गनर्े जिम्बा लिएका ठेकदारको पनि ,। यतिखेर म आफ्‍नो ओला किबोर्डमा हल्लाउदै छु । तर पनि मेरो कानमा त्यही नारा गुज्जीरहेको छ ।
Posted by Journalist Yadav at 2:14 AM No comments:
........................त्यही नारा मेरो कानमा गुज्...